Global Voices မြန်မာ » ကလေးချော့တေးများ သီဆိုကာ ဘချူလာ ဘာသာစကားအား ထိန်းသိမ်းခြင်း · Global Voices မြန်မာ » Print
ကလေးချော့တေးများ သီဆိုကာ ဘချူလာ ဘာသာစကားအား ထိန်းသိမ်းခြင်း
ဘာသာ​ပြန်​တင်​ခဲ့​သည့် နေ့စွဲ 22 ဇူလိုင် 2015 23:57 GMT 1	 · ရေးသား​သူ Eduardo Avila ဘာသာ​ပြန်​သူ Thant Sin
အမျိုးအစားများ: ဩစတြေးလျ, ပြည်သူသတင်း, ဘာသာစကား
ဖရေဆာကျွန်း by EVC2008. Used underaCC BY-NC-ND 2.0 license.
သြစတြေးလျနိုင်ငံ ကွင်းစလန်းပြည်နယ်တွင်ရှိသော ဖရေဆာကျွန်းပေါ်မှ တွေ့ရှိသော အထောက်အထားများသည် ကနဦး တိုင်းရင်းသားများဟာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀ လောက်ကြာသော အချိန်ကတည်းကပင်  နေထိုင်ခဲ့မည်ဟု ညွန်ပြသည်။ မျိုးရိုးစဥ်ဆက် ဤဒေသကို ပိုင်ဆိုင်လာသော ဘချူလာ လူမျိုးများသည် လှပဆန်းကျယ်သော သဘာ၀ ပတ်၀န်းကျင် နှင့် ထို ကျွန်းကလေးအား သုခဘုံဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော က'ဂရီ ဟု ခေါ်၀ေါ်ကြသည်။
သို့ပေမဲ့ ဘချူလာ လူမျိုးများသည် သူတို့အား နယ်မြေမှ နောက်ဆုံး ထွက်သွားရအောင်ပြုလုပ်သော ကိုလိုနီ ပြုသူတွေ ရောက်ရှိလာပြီးနောက် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
ထိုအချိန်တွင်ပဲ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒများ နှင့် ကန့်သတ်မှုပြုလုပ်သော ဘာသနာပြုအဖွဲ့များကြောင့် ဘချူလာ ဘာသာစကားသည်လည်း ထိခိုက်ခဲ့ရသည်။
ဘချူလာ ဘာသာစကား စီမံကိန်း၏ ယနေ့ အခါ ပြန်လည်အသက်သွင်းရန် ကြိုးပမ်းမှု၏ ကျေးဇူးကြောင့် ဘချူလာ စကားသည် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာနေပါသည်။ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ စိတ်၀င်စားမှုများလာအောင် အားပေးဖို့ ကူညီမည့် အဘိဓာန်များ၊ သီချင်းခွေများ နှင့် ရပ်ရွာထဲမှ စာကြည့်တိုက်တွင် ဘာသာစကားသင်တန်းများ  ကဲ့သို့သော အစီအစဥ်များကို ထို စီမံကိန်းမှ ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
ဒီဂျစ်တယ် မီဒီယာ နှင့် အင်တာနက်သည်လည်း ပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ ကြိုးပမ်းမှုများတွင် ကဏ္ဍတစ်ခုမှ ပါ၀င်နေသည်။ ABC Open ၏ “Mother Tongue (မိခင်ဘာစကား)”ဟုခေါ်သော စီမံကိန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနှင့် ဒေသခံ ရပ်ရွာများသည် အေဘီစီ ခေါ် သြတစတြေးလျ ရုပ်သံလွင့် ဌာန (Australia Broadcasting Corporation) မှ ဗီဒီယို ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေါင်း၍ ကနဦး တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားများ ပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်းကို အချက်အချာထားသည့် ဗီဒီယိုများကို ဖန်တီးရန် ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။
ထိုကဲ့သို့သော ပူပေါင်းရိုက်ကူးသော ဗီဒီယို တစ်ခုကို ဟာဗီ ဘေး (Hervey Bay) ဒေသရှိ ကော်ရာ၀င်ဂါ ကနဦးတိုင်းရင်းသား အဖွဲ့ (Korrawinga Aboriginal Corporation ) မှ ဒေသခံ ဘာသာဗေဒပညာရှင် ဂျိုက်(စ်) ဘွန်နာ (Joyce Bonner) နှင့် ABC Open မှ ထုတ်လုပ်သူ ဘရက် မာဆေလို(စ်) (Brad Marsellos ) တို့နှစ်ဦးသည် အတူတူ ပြလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဘွန်နာ၏ မိခင် ကိုယ်တိုင်သီဆိုထားသော ရိုးရာ ဘချူလာ ကလေးချော့တေး အား ဝေမျှသည့် ဤဗီဒီယိုအား သူတို့ သည် အတူတကွ ဖန်တည်းခဲ့ကြသည်။
Yunma-n Walabai, Walbai Yunma-n
Bula walalbai mil nhaa Biral
Bula walalbai binang buranga ngunda yaalam
Kalim walalbai dunam yaalam galangoor
Yunma-n walalbai walbai yunman
ဘုရားသခင်ကို မျက်၀န်းလေးနှစ်ခု မော့်ကြည့်လေသည်
နားရွက်လေးများက ဘုရားသခင်၏ စကားများကို နားစွင့်လေသည်
ပါးစပ်ကလေးသည် အမှန်တရားကို ပြောလေသည်
ခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းများကို ဖော်ပြသော ဘချူလာ စာလုံးများကို သင်ပေးသော ဗီဒီယို  နောက်တစ်ပုဒ်ကိုလည်း သူတို့ အဖွဲ့က ပူးပေါင်းရိုက်ကူးခဲ့ပါသည်။
ဤဗီဒီယိုများသည် ဘချူလာ ဘာသာစကားအား ပြန်လည်အသက်သွင်းရန် ဗျူဟာထဲမှ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်သည်။ ဘချူလာ ဘာသာစကား စီမံကိန်း၏ အစပျိုးခဲ့ပုံနှင့် အောင်မြင်စေခဲ့သော နည်းနာများအကြောင်းနှင့် ပက်သက်၍ ဘွန်နာ နှင့် အင်တာဗျူးကိုလည်း ဤနေရာ တွင် ဆက်လက်၍ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
URL to article: https://my.globalvoices.org/2015/07/688
 ကနဦး တိုင်းရင်းသားများဟာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀ လောက်ကြာသော အချိန်ကတည်းကပင်: https://en.wikipedia.org/wiki/Fraser_Island#History_and_settlement
 အဘိဓာန်များ၊ : https://books.google.com.bo/books/about/Dictionary_of_the_Butchulla_Language.html?id=z9GutgAACAAJ&hl=en
 Mother Tongue : https://open.abc.net.au/explore?projectId=95&sortBy=interest&isFeatured=0
 Korrawinga Aboriginal Corporation: http://www.slq.qld.gov.au/resources/atsi/languages/centres/korrawinga
 Brad Marsellos: https://open.abc.net.au/people/2452
 ဘချူလာ ကလေးချော့တေး: https://open.abc.net.au/explore/51938